द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । झरना थापा निर्देशित सिनेमाले केहि समय सुस्ताएको सिने बजारलाई पुन: ब्युझ्याएको छ । शुक्रबार आक्रामक व्यापार गरेको सिनेमाले शनिबार झनै राम्रो व्यापार गर्यो । देशभरका
प्रिमियरमा ‘ए मेरो हजुर २’लाई उत्कृष्ट प्रतिक्रिया ! (प्रिमियर फोटोकथा)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘ए मेरो हजुर २’ले ग्राण्ड प्रिमियर सम्पन्न भएको छ । कुमारी हलमा गरिएको प्रतिक्षित प्रिमियरमा पाहुनाको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो ।
भदौ ५ मा रुद्रप्रियाले काटिन केक (फोटो कथा)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । अभिनेत्री रेखा थापाले आफ्नो ३४ औं जन्मदिन मनाएकी छन् । राजधानीमा आफ्नो परिवार, नजिकका साथी र मिडियाकर्मी विच केक काटेर सेलिब्रेसन गरिन । रेखालाई जन्मदिनको शुभकामना
‘भुइँमान्छे’ र सिने पत्रकार बीचको भलिवल कसले जित्यो ? (फोटोफिचर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । सिनेमा ‘भुइँमान्छे’ र सिने पत्रकारहरुको मैत्रीपूर्ण भलिवल खेल सकिएको छ । जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय भलिवल प्रशिक्षण कोर्टमा आयोजना भएको खेलमा ‘भुइँमान्छे’ टिमले सिने पत्रकारलाई ३-१ को सेटमा
तीन कथामा सकियो ‘कथा काठमाडौँ’ (तस्विरहरु)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । भिजे संगीता श्रेष्ठको डेब्यु निर्देशन रहेको फिल्म ‘कथा काठमाडौँ’को सम्पूर्ण छायांकन सकिएको छ । फिल्मको छायांकन तिन चरणमा २३ दिन लगाएर सकेको डेब्यु निर्देशकले बताइन
पुजाको जन्मदिनमा पलले गीत गाउँदा (फोटोफिचर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । आफु अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को गीत सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री पुजा शर्माले आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छन् । राजधानीमा आयोजित जन्मोत्सवमा फिल्मकर्मी र पत्रकारहरुको उपस्थिति
Congratulations: फिल्म पत्रकार आर.के. सुबेदीले लेखाए गिनिज बुकमा नाम !,
संसारको सर्वाधिक उचाइमा आयोजना भएको अवार्ड विधा अन्तर्गत यो अवार्डलाई गिनिजले नाम लखेको हो । आरके अर्थात रामबाहादुर सुबेदी संगै पुष्कर नेपालको पनि गिनिजली नाम उल्लेख गरेको छ । ‘नोभेम्बर
नेपाली चेली तेरियालाई झलक दिखलाजामा जिताऔं अभियान सुरु, भोट गर्ने तरिका सहित
सन् २०१२को चर्चित भारतिय टेलिभिजन रियालिटी शो ‘डीआइडी-३ को विजेता वुटवलकी तेरिया फौज मगर अर्को सफल डान्स रियालिटी शो ‘झलक दिखलाजा’को फाइनलमा पुगेकी छिन् । आगामी जनवरी २१ मा भव्य
मंगलबार साँझ फिल्म लभ साशाको रेड कार्पेट प्रिमियर गरिएको छ । राजधानीको क्युएफएक्स कुमारी हलमा आयोजित भब्य प्रिमियरमा सिने क्षेत्रका प्राय हस्तीहरुको उपस्थिति थियो । प्रिमियरमा सिनेमाकी अभिनेत्री केकी अधिकारी
दुबईमा आयोजित नेफ्टा अवार्ड निकै भब्य रुपमा सम्पन्न भयो । अवार्ड वितरण प्रति केहि सिनेकर्मीले असन्तुष्टी पोखे र यसो गर्नु उनीहरुको आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार पनि हो । अवार्ड
9th Nefta Awards 2016: Complete list of winners
The Cinema Times, 9th Nefta awards that was organized on Friday at Leisureland Ice Rink markedasuccessful ceremony. The program that was organized by Spectrum, Concept vision film production
नवौं नेफ्टा अवार्डमा दया र नम्रता संगै पशुपती प्रसाद उत्कृष्ट (बिजेता सुचि सहित)
दुबईमा आयोजना भएको नवौ नेफ्टा अवार्ड सम्पन्न भएको छ, अवार्डमा फिल्म कबड्डी कबड्डीबाट दयाहांग राईले उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड हात पारे भने फिल्म क्लासिक बाट अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ उत्कृष्ट भईन् ।